I-Cosmetics esekelwe kwi-accin acid
Ngaba ufuna ukubeka iimiba ze-amber ngosuku olumnyama? Bafana nelanga elincinci: kwaye iphakamisa imizwelo, kwaye ngokudibanisa neengubo ezikhethiweyo zibonelela ngokutsha. Iipropati ze "ilitye lelanga" - kwinkonzo yolutsha kunye nezimonyo. I-Cosmetics esekelwe kwi-accin acid-icandelo le-creams anti-anti-aging. Ngegunya lezi zixhobo, siya kukuxelela kule nqaku.
Le asidi iyadingeka ukuzalisa iiseli ngamandla. Ukuze uyifumane, akuyimfuneko ukunqumla ukukhanya kwegolide ekhangayo eBaltic. I-asidi ye-Succinic kunye nezonyango ezisekelwe kwi-acinic succinic zihlanganiswa kumzimba womntu. Usebenza njani?
Masisebenzise ukutsalwa okufutshane kumhlaba weselula. Kwiiseli zethu kukho imitochondria. Ezi zizodwa "zakhiwo" ezivelisa i-adenosine triphosphoric acid (ATP), umthombo wamandla eselula. I-Mitochondria inokuthelekiswa nama-reactor. Ukuba basebenza ngokugqibeleleyo, iiseli zithola isabelo esaneleyo se-ATP.
Zigcwele amandla , zisebenza ngaphandle kokungcola ixesha elide. Isiphumo sesikhumba esilungileyo. I-ATP yincinci - iiseli zikhawuleza, zife ngaphambi kwexesha. Ukubonakala kwesikhumba kuncipha: kuya kuba buhlungu, kulahlekelwa ukunyaniseka kwayo, imibimbi ibonakala kuyo. Enye yezona zinto zibalulekileyo ezibandakanyekayo kwimveliso ye-ATP yi-accinic acidic, kunye nokusetyenziswa kwezimonyo ezisusela kwi-accin acid. Xa le nto inganele, i-mitochondria ayikwazi ukuzalisa ngokupheleleyo i-ATP. Iiseli zithintela amandla, kwaye isikhumba siyabadala. Iimpawu ze-acinic acid zibazalise ngezinto eziyimfuneko ezivela ngaphandle-ukugcina ulutsha. Njengomthetho, ihlanganiswa yindlela yamachiza. Iidremu ezine-accinic acid zinika iiseli zobungqimba bomhlaba amandla amakhulu amatsha.
Ngoxa uncedo lwezonyango ezisekelwe kwi-acinic succinic, ulusu lwakho luba lukhuni, lukhulu. Ibonakala ijonge ngakumbi, umbala wayo uphucula, ubuyiselwa ngokukhawuleza. Ngoko ke, ukuba usebenzisa i-creams ne-succinic acid, izihlathi zanyamalala ngokukhawuleza kwi-cushion, eyasala emva kokulala. Iyanciphisa ubunzulu bombango.
Ixesha eliqhelekileyo lokusetyenziswa kwezimonyo nge-accinic acid - iinyanga ezintathu. Emva koko, kukufanelekile ukuphendukela kwamanye amatsalane aguga. Emva koko unokubuyela kwimali esekelwe kwi-accin acid. Ngokuqhelekileyo emva kweminyaka engama-30-35. Uhlala kwisixeko saseGassy? Ukwenza ama-creams asebenzayo kunokwenzeka ukuba uphendule kwaye ungaphambuki ukuba ubonile utshintsho lwamaxesha ebusweni.
I-amber acid ihlanganiswa emzimbeni wethu. Njengomthetho, iinjongo zaso azibanga ukugatywa, ukuphendula okuthe tye.
Abavelisi baseYurophu baye bakhupha umkhiqizo omtsha kunye ne-succinic acid yeplastics. Le yinkqubo enempumelelo kakhulu yokulwa namanqaku eminyaka-iigels zijojowe phantsi kwemibhobho, kwaye isikhumba sichitha. Olu hlobo lwazi luvele luvele kwiimarike zethu. Ngendlela efanelekileyo ngayo, i-cosmetologists iza kuba nezigqibo emva koko. Kodwa iziphumo zokuqala zikhuthaza kakhulu.
Ngendlela efanelekileyo yobomi. Iphupha elihle, ukuhamba ngaphandle, ukuyeka i-cigarettes, imenyu ecebileyo yamavithamini kunye nezimonyo ezisekelwe kwi-accin acid, ziya kufumana amanyathelo athembekileyo emzabalazweni wobutsha bakho. Kodwa izenzo ezichaseneyo - ukutshaya, ukungabikho kokulala, ukutya okutya ngokukhawuleza, ubomi kunye nefestile evaliweyo, kuya kukunyanzela iinzame zeziqhamo ezihamba phambili. Indlela yokuphila enempilo kunye neyona mveliso yinto enhle kuwo onke amabhinqa, kuba akusiyo wonke umntu onokuphumeza esi siphumo. Khangela ulusu lwakho, kwaye kamva, uya kukubulela ngobuso obuhle kunye nombala!
Ukubuyiswa kwesithombe kunye nommandla phantsi kwamehlo
Ubushushu obujongene nobusi
Ukunyamekela ukunyamekela imilomo enobuchule
Ukunakekelwa kobuNtshutshiso obusakhulayo
URenata Litvinov wayekrokrelwa kwi-BDSM-predilections, ifoto
Ungayifumana njani imali engaphezulu kwesikhwama sakho?
UBobrik: yintoni le ubhokhwe, indlela yokwahlula isambatho somboya kwi-beaver kwi-coat yoboya evela kwi-beaver
Yonke into enomdla ngepasta
Umkhangeli wenkathi - ubomvu obunobumba
Ukukhangela i-swimsuit ephelele: njani ukhetha ukutshintsha okufanelekileyo
Isobho sePatato ngamakhowe
Ioli ye-palm palm: iipropati
Iikhenkethi zeKrisimesi zeKhanya
Izityalo ezingaphandle: i-avocado
Indlela yokuqala ukuvuyisana nabo osebenza nabo besuka emsebenzini kusukela ngoFebhuwari 23, 2018: izikhongo, izinkondlo, iprose
Ukulinganiswa kokuphakama nobukhulu bomntwana
Indlela yokwenza ngokukhawuleza kwi-solarium